Kwenzekani Binance Exchange futhi lapho amabhidi aqala - Blockchain Izindaba
Februwari 9, 2018 admin
Kwenzekani Binance Exchange futhi lapho amabhidi aqala
Naphezu zithembiso, Binance awuhambanga inthanethi ekuseni. Ngaphezu kosuku edlule, umsebenzi lobuchwepheshe kwaqala exchange isitokwe, okumele kuphela kuholele “ukwehla zesikhashana umkhiqizo,” kodwa wagcina eseyekile umsebenzi exchange futhi yadonsa isikhathi esingaziwa. Izolo, Binance CEO Changpeng Jao ​​wabhala ku-Twitter ukuthi kwakukhona nobunzima esingalindelekile e yokukopisha idatha, futhi okubaluleke kakhulu kudinga kabusha ukuvumelanisa database, okuyinto oluzothatha amahora amaningana.
Ngezinye 8.00 e Berlin, Jao waphinda ubeke amazwana isimo, ethi developers ozama izindlela ezintathu ukuvumelanisa, zehlukene isivinini: 1-2 amahora, 5 amahora 9 amahora ngokulandelana. Kuleli qophelo kuyacaca ukuthi izindlela okusheshayo akusebenzanga. Ngokusho ukwaziswa kwamuva, le “sokugcina ukuqinisekiswa idatha” manje eyenzekayo, resumption of zokuhweba kulindeleke ngesikhathi 15.00 ku Berlin. Kungakapheli nehora ngaphambi exchange isitokwe iku-inthanethi, abasebenzisi bazokwazi ukukhansela oda. Ngaphezu kwalokho, iqembu wamemezela ukuthi yayiwuphawu ukwazisa “Ngokuqhubeka ukweseka”, exchange kuzonciphisa nokuthunywa 0.03% ngakunye uFebhuwari 24.
Naphezu kweqiniso lokuthi Changpeng Jao ​​ishilo ngokuphindaphindiwe ukuthi Exchange okungaxhunyiwe ku-intanethi kuphela ngenxa yomsebenzi lobuchwepheshe, waphika kuhlasela hacker, abanye abasebenzisi namanje ucabanga ukuthi Hack. Ngokuqondene, imibono kusukela exchange abangu yafuna nguJohane McAfee, ethi “lingahlangani usevumile ekuhlaseleni hacker lize waphoqeleka.” Izolo ebusuku, McAfee wabhala ku-Twitter yakhe ukuthi “akusho Bazama ukuhlwanyela FUD,” kodwa uthola inqwaba imiyalezo ngolwazi mayelana nokugenca exchange isitokwe. Ukuze okuthunyelwe enamathiselwe skrini, ngaphansi kwazo, ngaphansi Binance logo, lokushintshisana kusolakala uyavuma ngokwayo ukuthi wahlaselwa. Futhi nakuba umuntu asekelwe Makafi, ummangalelwa uthe uchwepheshe eziningi mfihlo kolwazi engasekelwe futhi ubufakazi ezingabazisayo: “Isithombe wathumela abanye” ophuzi “iqembu – ukuze afakazele amaqiniso?”, “Angikaze ngizwe lutho Photoshop? ukuvuthwa, “” ungumuntu uchwepheshe yezokuphepha. ”
Makafi ethi “nje ubuza umbuzo wokuzihlola” futhi njengoba isazi nokuvikeleka uyazi ukuthi “uma ukuhlaselwa kwakwenzeka nemizamo ukubuyela izimali azisuswanga ngokushesha, amathuba ululama kubo ziyancipha zero ngaphakathi 24 amahora.” Nokho, CEO Binance, eyavula tweet amaningi, wathi ukuthi uhlelo namanje “ihambisa FUD”, niqinisekile: “Sizokwenza ufakazele ukuthi iphutha.” Ukuphendula amacala, Binance uthumele Tweet ne bitcoins isetshenzwe namakheli Ethereum:
Awuzami ukusakaza FUD, kodwa Ngithole inqwaba imibiko efana nale. Ngizama nje ukuqonda. Njengoba umcwaningi yezokuphepha, Ngiyazi ukuthi Hacks ezingaba kulula kakhulu ukuxazulula uma uphenyo ngokushesha. Ngemva kwezinsukwana, khulisa ahambisane nemsebenti lowentiwe, oda manitude. pic.twitter.com/u1PL9Z4tGf
— John McAfee (@officialmcafee) Februwari 8, 2018
Kwenzekani Binance Exchange?
Inani yezwakala has ...
Uma umtshali wemali uyobe uye f ...
Coinbase oluqalisa cr ...
Thumela Previous:Canadian mfihlo exchange Coinsquare kuphakamisa $ 30M
Thumela Landelayo:Coincheck umemezela ukubuyiselwa kwemali luqale ngesonto elizayo